Lokom-boaloboka matavy misy lokony mineraly 100% voajanahary voajanahary tsy misy poizina, habibiana ary lokon'ny paraben tsy maharitra maharitra.
Tsara tarehy sy maharitra ny lokomena matte dia malama, mahasosotra, mahazaka akanjo, tsy maina ary miloko be.
Voalohany:Ny lokon-lokon'ny matte misy anay dia manana loko malaza indrindra. Matte manintona, maharitra sy mateza, mora esorina amin'ny menaka fanadiovana molotra. lamba malefaka miaraka amin'ny loko mamirapiratra hitazomana ny molotrao malama sy malefaka.
Roa voalohany:Namboarina tamin'ny akora voajanahary, ho an'ny karazana hoditra rehetra, ao anatin'izany ny hoditra mora tohina. Miaraka amin'ny lokomena matte tsara dia tsara izy ireo ary maharitra vokany.
Lipstick matte malefaka sy malefaka, ity lokomena matte malama manaitra ity dia manana loko matsiro sy pigment matte, ary ny effet matte malama dia mety hiparitaka eo noho eo.
Confidante sy nofinofy, ity lokomena matte ity dia tsy maina mihitsy, crème, nofy ary matte foana! Ankehitriny dia misy andiana loko matte vaovao hisafidianana. Ireo loko lokomena matte marani-tsaina ireo no tena ilain'ny molotrao.
Telo voalohany:Silky, tsara tarehy ary kanto, mamolavola moramora ny molotrao, mety amin'ny makiazy vanim-potoana rehetra, indrindra amin'ny birao, mampiaraka, miantsena, manao fety miaraka amin'ny namana. Mety ho fanomezana ho an'ny olon-tianao, fianakavianao ary namanao mandritra ny fetin'ny Noely, andron'ny mpifankatia, fitsingerenan'ny andro nahaterahana ary fety hafa.
Fantatray fa sahirana ianao, ka izay no antony namoronanay ity lokomena mora entina ity. Izy io dia tonga amin'ny endrika endrika voafintina izay ahafahanao mitahiry mora foana ao anaty kitaponao na kitapo fanaingoana.
Efatra voalohany:Loko mareva-doko, maro loko kokoa noho ny lokon'ny rendrarendra sy ny effets mahavonto. Ny lokomena JOYO dia manan-karena amin'ny famokarana mahavelona ary afaka manalefaka ny molotrao.
Loko molotra manosotra tsara tarehy, mampiasa lokomena JOYO hitazonana molotra malefaka sy malefaka ary mando hatrany. Misafidiana karazan-loko mahaliana ny maso hahazoana loko miloko maharitra sy moisturizer matanjaka.
Ny lokon'ny JOYO, na lokomena mena miloko na loko miboridana mety, dia afaka misafidy loko amin'ny fotoana maro samihafa. Misafidiana lokomena Matt, mamorona loko miloko avo, na misafidy lokomena lokon'ny crème hamoronana molotra malefaka sy malefaka ary mando.
Fampiharana lokomena, fitsingerenan'ny andro nahaterahana, fampakaram-bady, fety, makiazy Halloween, lanonam-pisakafoanana, fotoam-pianarana, fanomezana amin'ny fetin'ny mpifankatia, fanomezana Krismasy, sns.
Teo aloha: Fanamboarana tarehy-BD-CH
Lipstiky ny zazavavy
Aloky ny molotra
JOYO © Zo rehetra voatokana. Vokatra asongadina, Sitemap, Borosy tsara indrindra, Matte Eyeshadow Palette, Solomaso maso volamena, Lokomena savony, Lipotra Mini, Eyeshadow tsara indrindra amin'ny crème, Vokatra rehetra